Asárja - Африкаанс - Бирманский Переводы и примеры
Вы искали: asárja (Африкаанс - Бирманский)
Serája, Asárja, Jeremía,
စရာယ၊ အာဇရိ၊ ယေရမိ၊
en Asárja, Esra en Mesúllam,
ဩဇက်သားယေဟု၊ ယေဟုသား အာဇရိတည်း။
အာဇရိသားကား ဟေလက်၊ ဟေလက်သား ဧလာသ၊
အဟိမတ်သား အာဇရိ၊ အာဇရိသား ယောဟန် တည်း။
အာဇရိသား စရာယ၊ စရာယသား ယောဇဒက် တည်း။
ရှလ္လုံသား ဟိလခိ၊ ဟိလခိသား အာဇရိ၊
အာဇရိသားကား အာမရိ၊ အာမရိသား အဟိတုပ်၊
sy seun was Amásia; sy seun was Asárja; sy seun was Jotam;
ယောရှသား အာမဇိ၊ အာမဇိသား ဩဇိ၊ ဩဇိသားယောသံ၊
မှူးတော်မတ်တော်ဟူမူကား၊ ယဇ်ပုရောဟိတ် ဇာဒုတ်သားအာဇရိ၊
En onder hulle was uit die kinders van Juda: Daniël, Hanánja, Mísael en Asárja.
ထိုသူတို့တွင် ယုဒအမျိုးသားဒံယေလ၊ ဟာနနိ၊ မိရှေလ၊ အာဇရိတို့သည် ပါကြ၏။
Maar die priester Asárja het hom gevolg en tagtig priesters van die HERE, flukse manne, saam met hom,
Toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Hanánja, Mísael en Asárja, sy metgeselle, die saak bekend,
ယောဟန်သားကား၊ ယေရုရှလင်မြို့မှာ ရှောလ မုန်တည်သော ဗိမာန်တော်၌ ယဇ်ပုရောဟိတ်ပြုသော အာဇရိတည်း။
Maar Daniël het aan die bediende gesê wat die owerste van die hofdienaars oor Daniël, Hanánja, Mísael en Asárja aangestel het:
En die hele volk van Juda het Asárja geneem, wat toe sestien jaar oud was, en hom koning gemaak in die plek van sy vader Amásia.
ယုဒပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည် အသက် တဆယ်ခြောက်နှစ်ရှိသော သားတော်ဩဇိကိုယူ၍ ခမည်းတော် အာမဇိအရာ၌ နန်းတင်ကြ၏။
ဩဇိပြုမူသော အမှုအရာကြွင်းလေသမျှ တို့သည် ယုဒရာဇဝင်၌ ရေးထားလျက်ရှိ၏။
ဩဇိသည် ဘိုးဘေးတို့နှင့် အိပ်ပျော်၍၊ သူတို့နှင့် အတူ ဒါဝိဒ်မြို့၌ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံလေ၏။ သားတော် ယောသံသည် ခမည်းတော်အရာ၌ နန်းထိုင်၏။
sachez (Французский>Латинский)scorpion insect (Английский>Бенгальский)apparence (Французский>Тайский)kansainvälistymisen (Финский>Чешский)sinense (Английский>Испанский)voorbereiding docent (Голландский>Английский)experiencias (Английский>Русский)até mais (Португальский>Испанский)ნვგვპჲგარნჲ (Грузинский>Русский)nam propter irrumabo (Латинский>Английский)ambjent (Мальтийский>Русский)dee (Английский>Японский)pomodoroaboccola (Итальянский>Английский)factum est vita (Латинский>Немецкий)khmer (Французский>Кхмерский)闲置 (Китайский (упрощенный)>Каталонский)chappal (Английский>Телугу)feed scrolling (Английский>Хинди)me not artist (Английский>Хинди)nezavisne (Английский>Хорватский)adi (Английский>Финский)reversibly (Английский>Греческий)preifatrwydd (Валлийский>Тайский)gew (Немецкий>Литовский)mera aisa koi irada nahi (Хинди>Английский)